Spain oo fadhisa booska 1aad, Argetina oo gashay sedaxaad qiimeynta bilaha ah ee Fifa. - Caasimada Online
Home Warar Spain oo fadhisa booska 1aad, Argetina oo gashay sedaxaad qiimeynta bilaha ah...
Spain oo fadhisa booska 1aad, Argetina oo gashay sedaxaad qiimeynta bilaha ah ee Fifa.
Xulka Spain ayaa weli fadhiya kaalinta koowaad ee qiimeynta bilaha ah ee Fifa. Wiilasha Vicente Del Bosque ayaa barbaro 1-1 ah la dhaafi waayey France, halka Argentina ay booska sedaxaad ku hugaamineyso Portugal oo isna galay kaalinta afaraad.
Germany ayaan weli ka bixin kaalintiisa labaad inkatoo xulkii ka reebay koobka Qaramada Yurub ee Italy uu fadhiyo booska shanaad. England ayaa degtay booska lixaad halka uu xulka Netherlands darajo ka dambeeyo.
Brazil, oo marti gelineysa Koobka aduunka ee 2014, ayaa fadhisa booska 13aad ka dib guulahoodii kulamadii saxiibtinimo ay ka gaareen Japan iyo Iraq.
Cote d’Ivoire, oo ah xulka ugu darajo sareeya Africa ayaa degay booska 15aad halka Japan oo ah xulka Matalaya Qaarada Asia uu ku jiro booska 24aad.
Kala sareynta qiimeynta bilaha ah ee Fifa 20ka xul ee ugu sareeya waa sidaan:-
15 Côte d’Ivoire
Xulka Dalkeena Somalia ayaa ku jira kaalinta 193aad wuxuuna ka sareeyaa xulal ay ka mid yihiin South Sudan, Andorra iyo San Marino.